LA OGAADAY: Fikirkii Uu Ed Woodward Ka Soo Jeediyay Shirkii Kooxaha Premier League Oo La Ogaaday-Miyuu Liverpool Koobka U Diidan Yahay? - Gool24.Net
LA OGAADAY: Fikirkii Uu Ed Woodward Ka Soo Jeediyay Shirkii Kooxaha Premier League Oo La Ogaaday-Miyuu Liverpool Koobka U Diidan Yahay?
Marba xog dheeraad ah ayaa laga helayaa kulankii todobaadkii hore kooxaha kubbada cagta England iyo maamuladooda ku dhex maray ee muddada dib loogu dhigayay kulamadii baaqiga ka ahaa xili ciyaareedkan.
Waxaa la helay xog la xidhiidha fikirkii uu gudoomiye ku xigeenka Manchester United ee Ed Woodward uu ka soo yeediyay shirkii khamiistii la soo dhaafay kaas oo looga arinsanayay waxa laga yeelayo kulamada xili ciyaareedkan baaqiga ka ah.
Iyada oo uu hore u soo baxay war sheegayay in 14 kooxood ay ka soo horjeedaan in Liverpool koobka Premier League la gudoonsiiyo haddii uu xili ciyaareedku dhamaan waayo ayaa la helay fikirkii uu Ed Woodward ka aaminsan yahay arintan.
Ed Woodward ayaa gabi ahaanba ka soo horjeedsaday kooxihii la sheegay in ay doonayaan in xili ciyaareedka laga dhigo waxba kama jiraan isaga oo ku tilmaamay cadaalad daro.
Gudoomiye ku xigeenka ahna madaxa fulinta Manchester United ee Ed Woodward ayaa ku dooday in ay cadaalad wayn tahay in xili ciyaareedka inta ka hadhsan la dhamaystiro isaga oo aan wax soo dhawayn ah siin wararkii sheegayay in xili ciyaareedka laga dhigo waxbaka kama jiraan.
Ed Woodward ayaa fikirkiisa ku xoojiyay Liverpool isaga oo doonaya in si cadaalad ay u noqoto xili ciyaareedka inta ka hadhsan la dhamaystiro waxayna arintani xoojin u noqotay kooxihii doonayay in aan la khasaarin dadaalkii la soo sameeyay.
Laakiin arintan ayaa loo arki karaa mid Ed Woodward aanu Liverpool oo kaliya wanaag ugu samaynayn balse uu doonayo in kooxdiisa Man United ay ku soo laaban karto Champions League maadaama oo haddii xili ciyaareedka waxba kama jiraan laga dhigo ay Champions league si rasmi ah ugu sii maqnaan karaan.
Man United ayaa wali fursad u haysata in ay ku dhamaysan karto kaalmaha sare ee Champions league loogu soo baxayo iyaga oo waliba xaalad aad u fiican ku jiray markii xili ciyaareedka la joojinayay waxaana la filayaa in Ed Woodward uu hadda aaminsan yahay in xili ciyaareedka oo la dhamaystiraa ay kooxdiisa ka caawin karto in ay tartanka kooxaha Yurub ku soo laabtaan.
Mid ka mid ah maamulka sare ee kooxda West Ham United ayaa si aan qarsoodi ahayn u sheegtay in xili ciyaareedkan laga dhigo mid ayna waxba ka jirin waxaana la aaminsan yahay in markii hore ay jireen kooxo fikirkan ku raacsanaa balse ay maamulada kubbada cagta England meel adag iska taageen.
Maamulka Premier league, FA-ga iyo EFL iyo madaxda kooxaha kubbada cagta Enlgand ayaa khamiistii kulan muhiim ah yeeshay waxayna iskula qaateen qodobo keenay in xili ciyaareedka dib loogu dhigay ilaa April 30.
Balse in hadda la ogaaday fikirkii uu Ed Woodward sida dhabta ah ugu taageeray in xili ciyaareedka la dhamaystiro ayaa xoojin siinaysa kooxda Liverpool oo u baahan 6 dhibcood oo kaliya si ay koobka Premier league ugu guulaystaan.
Maamulka Premier League ayaa haddaba ka fikiraya qaabkii garoomo madhan loogu ciyaari lahaa kulamada baaqiga ah si ay uga badbaadaan in xili ciyaareedka cusub ee soo socda uu saamayn ku yeesho dhamaystiran xili ciyaareedkani.
Waxaa socda qorshe lagu doonayo in 48 kii saacadoodba hal kulan ay kooxuhu ciyaari karaan, garoomada oo madhan iyo TV-yada oo dhamaan kulamada laga baahin doono balse qorshahan ayaan wali si rasmi ah loogu dhawaaqin.
Si kastaba ha ahaatee, saamaynta coronavirus ayaa wali ah dhibaatada ugu wayn ee xagal daacinaysa qorshe rasmi ah oo uu maamulka Premier leauge soo saari lahaa iyada oo la filayo in waqtiyada soo socda la bixin doono xogta qaabka xili ciyaareedka lagu dhamaystiri doono.